ALAKAMISY 24 SEPTAMBRA 2020
Araka ny antontan’isa ofisialy navoakan’ny ivon-toeram-pibaikoana ny ady atao amin’ny “Covid-19” eny Ivato dia niampy roa indray ireo lavon’ny “Coronavirus” teto Madagasikara. 2 juillet 2020
Hatreto izany dia tafakatra 22 ny fitambaran’ireo namoy ny ainy hatramin’ny nahatafidiran’ ity valanaretina ity teto an-toerana nanomboka ny volana marsa lasa teo. Araka ny fampitam-baovao dia ny ankamaroan’ireo nindaosin’ny fahafatesana dia saika ireo olona manana aretina mitaiza avokoa, izany hoe ireo vondron’olona marefo. Manoloana izany indrindra no mila hanamafisana hatrany ny fitandremana ho an’ireo karazan’olona ireo. Ny manodidina azy ireo ihany koa, hoy ny Profesora Vololontiana, dia mila mitandrina mafy mba tsy hahazo ny tsimokaretina ka hamindra amin’izy ireo.
Araka ny antontan’isa ofisialy hatrany dia tranga vaovao miisa 89 indray no voamarina, omaly.
“Misokatra ny zotra nasionaly, hiverina ny sidina mankany ivelany” FEPETRA ARA-PAHASALAMANA (391) 21 septembre 2020 Sarona ilay miaramila mpamatsy basy sy mpiray tendro amin’ny jiolahy ANTSIRANANA (121) 24 septembre 2020 Tsy nandrenesam-peo intsony ny Fitsarana Malagasy RAHARAHA RABEKOTO RAOUL (116) 24 septembre 2020 Maty voatifitra i Sopa mpamaky fasana sy efa nahafaty zandary ANTSALOVA (97) 22 septembre 2020 Potiky ny afo koa ny Sekoly “Notre Dame de Lourdes” MANJAKANDRIANA (90) 21 septembre 2020 Nodimandry teo amin’ny faha-82 taonany Ramahafadrahona ZAVAKANTO (78) 22 septembre 2020